Laba Markab Oo Ku Xidhnaa Dekeda Berbera Oo Isku Dhacay Iyo Khasaaraha Ka Dhashay Labadan Markab |
Laba Markab Oo Ku Xidhnaa Dekeda Berbera Oo Isku Dhacay Iyo Khasaaraha Ka Dhashay Labadan Markab
War deg deg ah oo hadda naga soo gaadhay magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegayaa in Laba Markab oo midi yahay kuwa Xoolaha qaada Iyo mid kale oo ah kuwa Koonteynarada qaada ay galabta abaara Afartii galabnimo isku dhaceen,iyaga oo labada Markabba ay taagnaayeen dekeda magaalada Bebera.
Labada Markab Midka Koonteenarada xamaabara ayaa lagu magacaabaa CMA Kaylas,waxaana Wakiil ka ah maamulaha shirkada Telesom qaybteeda Berbera Mustafe Cali Cumar halka Markabka Xoolaha qaada isna lagu magaacabo Iimaan isla markaana Wakiil ka tahay shirkada Aljaabiri ee Xoolaha ka ganacsata.
Markabka lagu magacaabo CMA Kaylas oo Dekeda ku xidhnaa ayaa la sheegay inuu ku dhacay Markabka Xoolaha qaadayay oo Galabta Dekeda Lagu Soo Xidhay. waxaana la sheegay in goobta Markabka Xoolaha qaadayay ay ku dhaweyd goobta uu ku xidhnaa Markabka Konteynarada Xambaaraa.
Khasaaraha ka dhashay isku dhaca Labada Markab ayaa naloo sheegay inuu labadaba Khasaare weyni gaadhay,waxaana la sheegay in Markabka weyn ee koonteenarada Xambaara uu dalooshamay Taangiga Shiidaalka kaydka ah oo dhinaca kaga yaala,halka Markabka Xoolaha qaadana uu dalooshamay Taangiga miisaanka Biyaha ee dhinaca kaga yaalaa,sidoo kale Waxa khasaare burbur ahi gaadhay birta xadiidka ah ee Labada Markab oo mid kasta dhinaciisa khasaare laxaad lihi gaadhay.
Labada Makab ayaa hada Dekeda Ku xidhan iyaga oo khasaare labaduba qaba,waxaana markabka Xoolaha qaadayay ee Iimaan qorshuhu ahaa in caawa la raro,hase’yeeeshee ma suuroobayso oo waxa dalooshamay taangigii Biyaha ee miisaanka u ahaa,iyada oo biyihii badda ee ku jiray Markabkana gudaha ugu daateen sida la sheegay.
Sababta shilka Labada Markab ayaa loo aaneeyay farsamo Xumo ka dhalatay Kabtankii soo xidhayay Markabka oo kamida ahaa shaqaalaha waaxda faraca Badda ee dekeda Berbera,iyada oo dabayli dhacaysay xiliga Markabka la soo xidhayay taasina ay fududaysay isku dhaca labadan markab
Dhinaca kale dekedda Berbera ayaa la sheegay in aanay wax khasaare ahi soo gaadhin inta muuqata iyada oo aan hoosta baddana aan laga war qabin inay isku yaacday oo duntay.
ilaa Hada Shirkada dekeda Berbera Maamusha Ee DP World iyo Waaxda faraca Badda ee dawlada Somaliland ayaan ilaa hada wax wara ka Soo saarin Kharaasaha ka dhashay isku dhaca labadan Markab.